Washington City Offices geogrids
Mumwe geotextile maviri Kamudzira
Two geotextiles chete Kamudzira
Long internet nonwoven Geotextile
Short internet nonwoven geotextile
nyoro permeable chubhu
Reverse Osmosis mvura kurapwa hurongwa
Brackish Ro mvura kurapwa hurongwa
Kukwanisa anobva 250LPH kuna 50TPH
Sea mvura kurapwa hurongwa
Standard Ro mvura kurapwa hurongwa
Mvura geosynthetics zvinhu
Q1: kupi boka rako iri?
A: kambani yedu iri Xi'an, Shaanxi Province, China.
Q2: Unogona kupa muenzaniso kwatiri?
A: Hongu, Tinogona kutumira vakasununguka ivhu, asi mutengi vanofanira kubhadhara mitoro.
Q3: Chii rako Odha uwandu?
A: The Odha uwandu ndiyo 5000 mativi Meter, asi zviri hachichinjiki..
Q4: Chii mubayiro wako mashoko?
Q5: Chii rako nguva pakusununguka?
A: nguva Production kazhinji kunodyira mazuva 3-5, kugadzirwa kugona: 5000-7000 mativi mita pazuva.
Ro mvura kurapwa hurongwa
Api mvura anopa sei kubata?
Harungashandurwi Osmosis ndiyo yakanaka mvura kurapwa mhinduro mune mhando dzakawanda water.tap mvura, aizivikanwawo matunhu neminisiparati manyuko, undergroundwater, izvo zvinosanganisira mvura brackish, uye saltwater. The guru mutsauko pakati izvi zvitatu mhando ndiyo Total ichiputswa nezvishoma (TDS) kugutsikana neimwe mhando. Sezvo kutonga thumbs, American Health Association kunoda kuti mvura yokunwa iri pasi 2,000 PPM TDS.Reverse osmosis rinowanzoshandiswa imwe pombi mvura ezvinhu kuderedza zvakaoma, kana ngwanda iiswe mvura kubva parwendo munzvimbo pombi simbi. Kazhinji Total ichiputswa nezvishoma ndiko kuda mvura yokunatsa mu pombi mvura systems.Underground reservoirs mvura kazhinji brackish, zvichireva kuti ane Mavhoriyamu huru munyu, asi kwete zvakakwana kuonekwa munyu mvura. Pasi Pevhu kakawanda anatswa nokuda zvokurima indasitiri, migodhi indasitiri. Pasi Pevhu ane inoremekedzwa kunangwa bottling indasitiri zvakare, nokuti rakasiyana chicherwa anofambidzana vanowanzoda inofadza kuravira.
Salt mvura neizvi osmosis (dzimwe nguva anonzi desalination) ndiyo pakona saltwater mumvura yokunwa. Ocean mvura ane kusvika 45,000 PPM TDS. Kushandiswa zvikuru pamusoro desalination kuuya kupa mvura munzvimbo kuti kushaya nguva dzose mvura yakachena.
Ko pretreatment zvakakodzera?
Zvakakosha chaizvo kuti inosimbisa mvura preconditioned kudzivirira membranes kubva uchisvibisa kukonzera vakurumidze failure.The Kamudzira inovakwa ane porous zvinhu kuti anobvumira mvura kuti vadarike, asi anoramba kusvika 99% of ichiputswa nezvishoma panguva pemvura. The ichiputswa munyu vari dzichiitika vanoramba mvura (brine rukova), apo vari pauri kutambisa. Kubvisa zvinhu asati kunokosha kubvumira Ro ndzira chii zvazvinofanira do.As ari Ro System kuramba ishande, ivo ichiputswa uye yakaturikwa nezvishoma vari inosimbisa mvura zvinoodza kuunganidza achitevedza Kamudzira pamusoro. Kana zvinhu zvakaoma izvi vanobvumirwa tivake, ivo pakupedzisira kurambidza ndima mvura kuburikidza membranes, zvichiguma nokurasikirwa throughput. (The throughput vanokwanisa pakati membranes unonyanyozivikanwa kunzi zvinoyerera zvazvingava, uye unotaurwa marita por mativi Rutsoka membranes pamusoro nharaunda pazuva.)
Yatinofanira kuwana mvura ongororo?
A uchida kuongorora makemikari (LSI, SDI, kana CFI) of Ro inosimbisa mvura chinhu chinokosha zvikuru nokuda kuziva zvinogona foulants. Izvi zvinofanira kusanganisira nokuyerwa pokuoma (calcium magnesium), barium, strontium, alkalinity, ph, uye kuiisa chlorine. The Data kubva kuongorora makemikari anogona kushandiswa mainjiniya afunge gadziriro yokuziva optimum
Kamudzira kuko zvose kuti zvichaita kuderedza katsika pakafunuka uye dhipoziti inotungamirwa uye maximize yavaipora uye zvinoyerera zvazvingava.
Chii chinoratidza chairo pretreatments chimwe Ro?
Mushoko rimwe: ongororo. Ose kunobva mvura vakasiyana, uye hauzivi zviri mvura yako kusvikira wava nacho waongorora. The mvura pachisara LSI, SDI, kana CFI tsika inoshandiswa tione pretreatment zvinodiwa yakati Ro System. Sezvo mvura rinopiwa zvakasiyana-siyana kubva imwe nzvimbo vachienda kune imwe, mumwe pretreatment kudiwa ichava yakasiyana.
Ko chikafu mvura kupfaviswa ne Ro?
Ion Exchange inzira inonyanyoshandiswa kuti kunyoroveswa uye kuderedza mukana chicherwa pamwero inotungamirwa pamusoro Kamudzira pamusoro. Ion Exchange kunyoroveswa anoshandisa yavaibvisa kutsiva scaleforming ions akadai calcium, magnesium, barium, strontium, simbi, uye aruminiyamu kudzivirira kuvadza Kamudzira zvinhu. The yavaibvisa siyana soluble chaizvo munyu, ayo nyore nekurambwa Reverse Osmosis System uye regai nyore kuumba chicherwa zviyero pamusoro Kamudzira pamusoro. A sodiumcycle softener iri regenerated pamwe yavaibvisa chloride brine. The andakapedza regenerant, pamwe softener sukurudza mvura, zvinofanira pauri kutambisa. Imhaka ichi kuti Ion Exchange pachii mafomu kuti vane yakakwirira simbi zviri munyika zvakaipa mvura.
Ko iine acid jekiseni zvakakodzera?
Kungofanana acidic mhinduro hazvisi zvakanaka membranes, caustic mhinduro vanoitirwawo zvinokukuvadzai Kamudzira zvinhu. Acid jekiseni anogona rapinzwa Ro pretreatment hurongwa kudzora ph uye kuderedza pakafunuka-achiumba Vanzveri inosimbisa mvura. Acid jekiseni inoratidzwa kana pakafunuka Anoumba Vanzveri brine yorwizi rinopfuura +0,3 sezvo kuyerwa kunoitwa LSI. Kana sulfuric kana hydrochloric asidhi anogona kushandiswa chinangwa ichi.
Ko ane antiscalant sei?
Antiscalants kwaratidzwa kuti abudirire pakukoka zvikamu pakati namakemikari cleanings of Ro membranes. zvigadzirwa izvi kazhinji akagadzira kuti zvinosanganisira inorganic phosphates, organophosphates, uye dispersants. Vamwe Antiscalant ane isakarurama mhosva Polymers uye dispersants anogona sei pamwe cationic Polymers inogona dosed kumusoro rukova risati vezvenhau filters. The Antiscalant kunofanira inowirirana Polymers izvi; zvimwe, maitiro chigadzirwa kuchaita wakaipa ari membranes.
Ita zvose hurongwa anoda mushonga okuchenesa?
Pasinei nezvose kudzivirira maitiro kubva uchisvibisa uye kurasikirwa zvinoyerera pakupedzisira membranes zvinoda mushonga okuchenesa. A welldesigned Ro Hurongwa kuchasanganisira zvokudya kuti okuchenesa skid kuti zviite rokutsvaira rikurumidze. The skid inofanira kusanganisira makemikari tangi, mhinduro hita, recirculating pombi, drains the, hoses, uye zvimwe kubatana zvose uye Fittings inodiwa kuita zvakakwana namakemikari kuchenesa yacho Ro modules.
A-1402, Lvdi Sohõ NO.6, Zhangba 1st Road, High-Tech Zone, Xi'an, Shaanxi, China